Internet sy bilaogy - Geofumadas
fironana sy toro-hevitra ho an'ny aterineto sy ny bilaogy.
Kanbanflow - fampiharana tsara hifehezana ireo asa miandry
Kanbanflow, dia fitaovana famokarana azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny browser na amin'ny finday, ampiasaina be amin'ny fifandraisana amin'ny asa lavitra, izany hoe, freelance type; Miaraka amin'izany, ny fikambanana na ny vondrona miasa dia afaka mahita ny fandrosoan'ny asan'ny mpikambana tsirairay ao aminy. Raha ...
Dingana mba hijerena finday iray
Raha jerena ny maha-zava-dehibe ny telefaona finday amin'ny fiainantsika andavanandro ankehitriny, dia mikarakara azy ireo toy ny zaza isika, tsy mividy fonosana azy, vera antonony ho fiarovana ny efijery, peratra ao an-damosina ary koa mpiaro ny rano raha tsy porofon'ny ...
Krizy Venezoela - Blog 23.01.2019
Omaly, tamin'ny 11 ora alina dia nivoaka ny rahalahiko nanohitra, noteneniko izy ireo mba hiakatra an-trano azafady, saingy hoy ny rahavaviko namaly - inona no hataoko any an-trano? Noana aho, ny hany atody ao anaty vata fampangatsiahana dia atody sy Raha misakafo iray aho dia misakafo atoandro amin'ny olon-kafa, manana ...
Internet sy Blogs, Politika sy demokrasia
Ny zava-misy marina na virtoaly? Iza no tsara kokoa manolotra tetikasa?
Ny fomba fampisehoana tetikasa dia niatrika fanovana lehibe, noho ny fanaovan-jery nomerika ny indostria sy ny fampiharana ny haitao vaovao. Ary fotoana fohy talohan'ny nahatongavan'ireo fandrosoana ireo ihany koa ny sehatry ny fananganana. Ny zava-misy marina sy ny zava-misy virtoaly dia manome ny fahafaha-manolotra tetikasa ...
Skrill - safidy iray amin'ny Paypal
Ny fandrosoana ara-teknolojia dia namela ny olombelona hifampiresaka na aiza na aiza, ary arakaraka ny fahaizany na ny asany dia azo atao ny manolotra karazana serivisy rehetra amin'ny sehatra toy ny Freelancer, Workana na Fiver, izay manana mpiara-miasa amin'ny resaka fandraisana sy fanaterana. ny fandoavam-bola amin'ny fomba samihafa. Ao amin'ity lahatsoratra ity…
Rincón del Vago: Ireo loharanom-pitaovana izay nahatonga anay ho tratry ny olana
Voalaza matetika fa ny vanim-potoanan'ny mpianatra no milamina indrindra ary tsara indrindra amin'ny fotoana iainan'ny olombelona. Io no vanim-potoana iainana rehefa tsy misy ahiahy ny olona iray, tsy mila mieritreritra be loatra momba ny asa ary tsy manahy ny amin'ny ho avy; ny vanim-potoana iainana rehefa ...
Misafidy mpamatsy mailaka betsaka - traikefa manokana
Ny tanjon'ny hetsika ara-barotra rehetra misy eo amin'ny Internet dia ny hiteraka lanja hatrany. Izy io dia mihatra amin'ny orinasa lehibe manana tranokala iray, izay manantena ny handika ireo mpitsidika ho varotra, ary ho an'ny bilaogy iray izay manantena ny hanana mpanaraka vaovao sy hitazona ny tsy fivadihana amin'ireo efa misy. Amin'ny lafiny roa, ny ...
Isa mangatsiaka avy amin'ny Top 40 Geospatial ao amin'ny Twitter
Tamin'ny fotoana iray dia tsy nino izahay fa ny hetsika nataon'ny kaonty Twitter dia nanjary lasa manan-danja tokoa. Saingy ao anaty tontolo iray rendrika an-dranomasina atiny misy antsika, lasa manintona ireo adiny telo amin'ny fiainana Tweet raha toa ka esorina amin'ny fomba tsy miova sy mifantina ireo lohateny maneho ny fahalalana, miampy ...
CartoDB, ny tsara indrindra mba hamorona sarintany an-tserasera
CartoDB dia iray amin'ireo fampiharana mahaliana indrindra novolavolaina tamin'ny famoronana sari-tany an-tserasera miloko ao anatin'ny fotoana fohy. Miorina amin'ny PostGIS sy PostgreSQL, vonona hampiasa, io no iray amin'ireo tsara indrindra hitako ... ary fandraisana andraikitra avy amin'ny fiaviana Hispanika, manome lanja azy io. Ireo endrika manohana azy satria fampandrosoana mivoatra ...
jeospatial - GIS, fanavaozana, Internet sy Blogs
Karmacracy, iray amin'ny tsara indrindra amin'ny bilaogy sy tambajotra sosialy
Ireo izay manana bilaogy, pejy Facebook na kaonty Twitter dia mety nanontany tena ireto fanontaniana ireto: Firy ny fitsidihana azoko avy amin'ny iray amin'ireo sioka nataoko? Firy ny mpitsidika tonga ny ora voalohany taorian'ny nandefasako rohy tao amin'ny pejiko Facebook? Ahoana ny fomba handaminana bitsika anio amin'ny 10:35 ...
pejy 1 pejy 2 pejy 3 ... pejy 12 Next pejy